International BreastFeeding Centre | Malagasy
International BreastFeeding Centre / Multi-Language Videos / Malagasy
Finonoana mety tsara
Ity zaza ity dia tena minono tsara- Rehefa misokatra tsara hisotro ny vavavy dia miato kely ny saokany, alohan’ny hanidiany ny vavany, izay no ahitana fa feno ronono ny vavany. Vao maika feno ronono ny vava, vao maika lava ilay fiatonan’ny saoka. Hita mazava tsara fa ny torohevitra hoe ampinonoana 20 minitra (na 10 minitra na 30 minitra, n’inon’inona) isakin’ny nono dia tsy misy dikany. Zaza minono tsara toa ity zaza ity mandritra ny 20 min amin’ny nono iray dia mety manda ny nono ilany satria voky tsara izy. Na dia fotoana fohy kokoa aza ny halavan’ny finonona dia mety efa mahavoky azy. Mihoatra ilay aza ao amin’ilay horonantsaray “ Mitsetsitsetsitra”. Ilay zaza mitsetsitsetsitra, dia mety minono mandritra ny ora maro nefa mbola tsy mahazo nono ampy tsara. Ny hevitra hoe mampinono manaraka fotoana dia tsy misy dikany. Ilay fiatoana dia afaka hita vao teraka andro vitsivitsy ny zaza. Jereo koa ny horonantsary momba ny zaza 2 andro. 28 ora sy 10 ora.
Jereo ny paozain’ity zaza ity eo amin’ny nono. Ny saoka mipetaka amin’ny nono, fa ny orona tsy mikasika. Ny molony ambany dia manarona ny lohanono avy ato ambany mihoatra ny molony ambony.
Ny fiatonan’ny saokan’ilay zaza rehefa mitsetsitra izy dia midika fa feno ronono ny vavany . Raha lavalava ilay fiatoana dia maromaro izany ny ronono azony.
Raha toa misotra toa izao ny zaza mandritra ny 20min tsy ankiato (ohatra, tsy manoro mampinono manaraka famataranandro izahay), dia mety tsy minono amin’ny nono ilany satria mety efa voky.
Tsy misy dikany ny manaraka fotoana rehefa mampinono.
Ity zaza hita eto ity dia vao teraka 40 ora teo aloha. Mipetaka amin’ny nono tsara ilay zaza. Ny saokany dia mikasika amin’ny nono tsara, fa ny orony dia misitaka kely amin’ny nono, ary ny molony ambany dia manarona ny lohanono avy ato ambany mihoatra ny molony ambony.
Amin’ny voalohan’ny horonantsary, miato tsindraindray ny saokany, fa amin’ny ankabezany dia mitsetsitsetsitra fotsiny izy fa tsy tena misotro.
Mipotsitra nono ny reniny fa tsy matetika toa ny ampianarinay. Tokony mipotsitra izy rehefa mitsetsitra ilay zaza fa tsy misotro, fa tsy rehefa tsy mitsetsitra mihitsy akory.
Ny manindry nono amin’izao taona’ny zaza izao (aloha’ny miakatra ny nono), dia tsy misy vokany raha tsy atao imbetsaka, tsy toa ny rehefa miakatra ny nono, dia tonga dia misy vokany ny manapotsitra ny nono.
1 min amin’ny horonantsary, manomboka misotona nono ilay zaza fa sorena amin’ny fivoakan’ny nono moramora.
Dia 1min sy 14 segondra, hita fa mavitrika misotro ilay zaza dia hita fa fiatoana maromaro amin’ny saokany.
Miverina misotro ndray ilay zaza avy eo (1min 37 segondra). Ny zaza mandray nono tsara sy noana dia tonga dia misotro tsara fa tsy mila kitikitihana ny tongony na asiana lamba lena ny andriny.
Ny zaza dia tsy tafatory eo amin’ny nono satria hoe vizaka, fa nono ny fihenan’ny fivoakan’ny nono. Ahoana ny hitazomana ny nono hikoriana?
1) fandraisana nono tsara
2) Fanindriana nono rehefa mitsetsitra ny zaza fa tsy misotro
Jereo ilay zaza ao anatin’ny horonantsary “Fampidiriana Fanampiana mampinono” fa taitra ary tonga dia mavitrika misotro raha vao mikoriana ny ronono. Mariho fa mety indray ny fanindriana nono ao amin’ny 2 min marika eo.
Zaza vao 10 ora
Ity zaza ity dia vao teraka 10 ora teo aloha. Hita eto ny fipetahana amin’ny nono tsara. Ny saoka mipetaka amin’ny nono, fa ny orona tsy mikasika. Ny molony ambany dia manarona ny lohanono avy ato ambany mihoatra ny molony ambony. Somary miankina amin’ny reniny kely koa izy.
Misotro ronono tsara ilay zaza. Hita izany satria miato ny saokany rehefa manokatra ny vavany tsara izy alohan’ny hanidiany azy. Tsy mazava tsara ilay fiatoana eto satria kely ny habetsahan’ny “colostrum” na ilay ronono voalohany- izay voa-janahary. Raha ilaina dia afaka tsindrina ny nono mba hahazo ronono kokoa ny zaza (araky ny hita ao amin’ny horonantsary “Zaza 2 andro”). Ny fanomezana ronono betsaka ny zaza rehefa manome azy ronono hafa noho ny avy amin’ny olombelona dia tsy manaraka ny fiziolojia sy tsy voajanahary, ary tsy mbola voa-porofo hoe tsara ho an’ny zaza.
Zaza 28 ora ampiana mandray nono
Mampiseho ny zaza mandray nono. Tsy lafatra, fa mety ihany. Tsy maheno marary ny ny reniny. Indroa vao tafandray nono tsara ilay zaza, fa tsy maninona; aleo tsy terena handray nono ny zaza raha tsy mety. Mariho fa tsy mitovy ila ny fipetahan amin’ny nono, ny saoka mikasika ny noo, fa ny orona tsy mikasika, ary manarona ny lohanono mihoatra noho ny molotra ambany ny molotra ambony.
Ny fipotsirana ny nono dia manampy ny zaza hahazo ronono kokoa
Zaza ampian’ny reniny manomboka aty ambonin’ny nono ankavia, dia mandray nono
Rehefa tsy mbola mahay mandray nono na manda mandray nono tanteraka ny zaza, ity fomba ity dia manampy ny zaza hanaiky ny nono. Mifampikasika hoditra amin’ny reniny ilay zaza, ary mampiseho fa vonona hitady nono. Rehefa manomboka mitady izy, dia ampian’ny reniny manantona ny nono izy sady tazominy ny lamosiny sy ny hatony. Mitandrina ny tsy hitazona ny lohany ilay reniny. Mila tazomina ny hatokin’ny zaza minono fa tsy ny lohany.
Zaza 4 andro, aorian’ny notapahina ny lela miraikitra, ny nono potserina
Vao notapahina ny lela niraikitra ho an’ity zaza ity.
Potserin’ny renininy arak any tokony ho izy ny nono. Miandry izy raha toa ka misotra na tsia ilay zaza (miato ny saoka) Raha tsy misotro ilay zaza, dia mipotsitra nono izy, tazominy ny nono potsitra mandra-pitsestitr’ilay zaza na raha mijanona misotro izy dia avelany ny nono. Miandry ilay zaza hitsetsitra indray izy ary raha mitsetsitra ilay zaza fa tsy misotro dia averiny indray ilay natao teo.
Tsoingoina ny loha-nono hanoroana ny tsy fandraisana nono tsara
Raha mandray ny loha-nono fotsiny ny zaza dia tsy mahazo ronono firy. Rehefa mandray nono arak any tokony ho izy , mikoriana tsara ny nono.
Fampidiriana Fanampiana mampinono
Mila fanampiana nono ity zaza ity. Ny fomba tsara indrindra handrasainy izany dia amin’ny fanampiana mampinono satria:
Mbola mandray nono ilay zaza no mbola misotro nono
Miatra minono ny zaza rehefa minono
Mianatra mampinono ny reny rehefa mampinono
Mbola mandray nono avy amin’ny nono ny zaza ka manampy mampitombo ny famokaran’ny reniny nono
Tsy hand any nono ny zaza, izay mety ho ataony raha omena fanampi-nono amin;ny tavoahangy na fomba hafa izay tsy amin’ny nono
Ny fampinonoana dia mitondra mihoatra lavitra nono ny nono, ary mifampikasika vatana ny reny sy ny zanaka
Fomba iray fampidirana fantsona manify dia ampidirina rehefa eo amin’ny nono ny zaza. Azo atao koa ny mametraka ilay fantsona eo amin’ny loha-nono vao ampandraisina nono ilay zaza.
Mariho ny paozin’ilay zaza
Mikasika amin’ny nono ny saokany fa tsy mikasika ny orony
Manakona ny lohanono mihoatra ny molotra ambony ny molotra ambany
Somary mitongilana miakatra any amin’ny mamany ilay zaza
Efa ninono tamin’ny nono roa ilay zaza nefa tsy mahazo ronono firy (mitsetsitsetsitra nono ny ankabezany- jereo ny horonantsary mampiseho zaza misotro sy tsy misotro ao amin’ny nono). Mila fanampiana nono ilay zaza.
Mariho ny manaraka:
Atosika ny sisin’ny nono mba ahitana ny vavan’ilay zaza
Satria somary mitongilana miakatra ilay zaza dia mora hita any vavany ary mora ampidirana ilay fantsona
Atsofoka amin’ny zoron’ny vavan’ilay zaza ilay fantsona
Atosika mahitsy mankany amin’ny tendan’ny zaza ilay fantsona no sady ampiakarain miakatra any ambony
Midina ao anatin’ny fantsona ny ronono fa tsy misotro ilay zaza (jereo ny horonantsary mampiseho zaza misotro sy tsy misotro ao amin’ny nono). Misy zavatra tsy mety.
Manandrana manapotsitra nono ilay reniny, nefa ny fipotsirana nono rehefa misotro no zaza vao tokony atao, fa tsy rehefa tsy mitsetsitra ny zaza. Fanampin’izany raha toa ka manao fanampiana nono dia tsy misy dikany ny hipotserana ny nono
21 segondra amin’ny horonantsary, ahetsiko ilay fantsona dia mikoriana ny nono. Ary misotro ilay zaza.
Mariho fa manokatra ny masony ilay zaza nony nanomboka nahazo ronono izy. Ny zaza akory tsy “kamo” fa misy setriny ny fikorianan’ny ronono mora. Zaza mbola kely toa ity hita eto ity dia lasa matory rehefa mihena ny fivoakan’ny nono, fa tsy voatery hoe ampy azy ny ronono azony.
Ahetsika kely indray ilay fantsona eo amin’ny 35 segondra. Raha toa ka mipetaka amin’ny nono tsara ilay zaza ary mipetraka tsara ilay fantsona, dia ny fanampiana nono dia tsy mandany fotoana mihoatra ny manome amin’ny tavoahanginono na amin’ny ratsantsanana. Ny fanomezana ronono amin’ny ratsantanana mba hanampiana nono koa dia tsy fomba lafatra fanampiana nono.
Eo amin’ny 1min amin’ny horonantsary, sitomiko midina kely ny saokan’ilay zaza. Tadidio fa ny fipetahana tsara amin’ny nono sy ny fametrahana tsara ilay fantsona no mampety tsara ity fomba ity. Rehefa sintomina midina ny saokan’ilay zaza dia mahazo nono betsaka kokoa ao anaty vavany izy.
Eo amin’ny 1min sy 18 segondra, sitomina mba tsy hitovy ilay ny paozin’ilay zaza raha oharina amin’ny nono rehefa atosik’ny reniny amin’ny sandriny ilay zaza.
Eo amin’ny 1min sy 55 segondra, misy ronono mivoaka eo amin’ny molotr’ilay zaza, midika fa misy tsy mety. Na tafala tamin’ny nono ilay zaza na tafala ilay fantsona. Rehefa ahetsika ilay fantsona dia mikoriana indray ny ronono.
Azo atao aloha ny manome ratsantanana ny zaza raha toa ka tsy mbola mandray nono izy.
Marihana fa io fomba io dia atao hampitony ilay zaza sy hampitsetsitra azy tsara. Mahalana mihotra ny 60 segondra io.
Tsy tokony atao fomba fanampiana nono rehefa tsy mety mandray nono io. Raha toa ka ilaina izany dia omena eo amin’ny nono ny fanampiana.
Nalaina sary ity zaza ity satria efa nandray nono izy tao aorian’izy nomena nono tamin’ny ratsantanana
Maninona izy no tsy mandray ny nono ankavia amin’ity horonantsary ity?
Satria efa ninono tamin’ny nono ankavia izy dia mihena ny fikorianan’ny ronono: ny zaza dia tian nono mikoriana haingana, ka na dia nanampy ny fivoahan’ny nono aza ny fanampiana nono dia tsy ampy azy izany
Mariho fa tsy terena hijanona eo amin’ny nono ilay zaza. Raha toa izy ka sahirana, na mandray ny nono ao anaty vava fa tsy mitsetsitra, na mitomany, dia avela miala izy dia avy eo averina indray.
Raha toa ka mandray nono ny zaza, tsy misy terena hijanona amin;ny nono izy satria efa mandray nono
Misotro amin’ny kaopy
Mety solon’ny tavoahanginono tsara. Ilaina tokoa ity raha toa ka tsy mety mandray nono ny zaza.
Marihana fa milelaka ny ronono amin’ny lelany ilay zaza. Tsy araraka ao anaty vavan’ny zaza ny ronono
Miolankolana sy misotina nono
Zaza efa lehibebe ity, 3 na 4-bolana eo ho ep, izay nihena ny abetsakin’ny nonon’ny reniny. Vakio ny fanazavana momba zaza mitombo lanja miadana rehefa avy nitombo malaky teo aloha, fa indrayndray mitranga ity fihenanan’ny nono ity. Anisan’ny antony mampihena ny famokaran’ny reny ronono ny fomba tsy mahabevohoka misy hormonina (toa ny fomba atao anaty ny tranon-jaza na lalan-jaza misy hormonina), ny reny mizatra mampinono amin’ny nono iray ihany fa tsy hoe mamita nono iray dia avy eo manome ny ilany. Fa ny antony matetika tokoa dia ilay antony hita ao amin’ny laharana “Ity antony (laharana 11) dia mila fanampiana fanampiny”
Miolankolana ilay zaza ary tsy mety mipetraka amin’ny nono tsara satria mihena ny fivoahan’ny nono. Mariho fa zara raha misotro avy amin’ny nono izy (tsy miato firy, jereo ny horonantsary “Finonoana tena mety” sy “Finonoana mety”, nefa tsy hita tsar any saokany.
Ity fomba ity dia matetika lazaina fa nono ny fivoakan’ny nono mafy loatra nefa rehefa jerena ny saokany dia hita fa satria mora loatra ny fikorian’ny nono. Kanefa ny zaza dia matetika misotina nono satria mihena ny fivoaka’ny nono toy izay hoe “mafy loatra”.
Fanapahana ny lela miraikitra
Fomba tsotra sy haingana izay mety mampisy fiovana be ny fahombiazan’ny fampinonoana. Ny fikarohana momba io fomba io dia mandresy lahatra.
Lalandra tery mivadika mena
Ny lohanono’ity reny ity dia mivadika fotsy rehefa avy minono ilay zaza. Afaka kelikely dia mivadika mena ihany ilay izy. Ity fiovan-doko ity dia indraindray arahin’ny marary sy sahala amin’ny may amin’ny lohan-nono. Io dia matetika noho’ny tsy fandraisan’ny zaza ny nono tsara na aretina avy amin’ny holatra.